Misafidiana ny mety amin'ny karazana Dredge - Ellicott dredges
Misafidiana ny mety amin'ny karazana Dredge
Amin'ny maha tompona dredge ho anao anao, angamba ianao no liana indrindra amin'ny haben'ny dredge milainao hamita ny tetikasanao. Ny valiny dia miankina amin'ny lafin-javatra maro, toy ny toe-piainana sy ny antsipirian'ny tetik'asa. Ny fananana hevitra momba ilay tetikasa na karazana tetikasa kasainao hovitaina dia hanampy amin'ny famaritana ny karazana Fitaovana fanoratana izany no mahafeno ny zavatra takinao.
Rehefa manombatombana dredge ary alohan'ny hividianana dia tokony hieritreritra ny mpiantoka, fikambanan'ny tompon-trano, tompon-tanàna ary tompon'ny marina:
Ny halatra sy ny lalànan'ny pumping mankany amin'ny faritra fanariana
Ny fihanaky ny sediment sy ny famokarana amin'ny ankapobeny
Ny fikojakojana, ny vidin'ny fitahirizana, ny karama, ny tombontsoa, ​​ny fiantohana, ny fahazoan-dàlana amin'ny dredge, ary ny fitaovana hafa koa rehefa tsy ampiasaina.
Na inona na inona karazana tetikasa, dia sarotra ny manao dredging. Ny fomba iray hanampiana amin'ny fampihenana ny isan'ny fisalasalana mialoha dia ny fiaraha-miasa amin'ny mpanamboatra dredge malaza izay liana hanampy anao hisafidy karazana dredge mety ho an'ny fampiharana dredging manokana.
Ny trondro Hopper dia sambo oceangoing mandeha irery izay natao hanangonana antsanga amin'ny alàlan'ny fitaovam-piadiana mitete izay manakaiky ny trondro eo am-pototry ny lalan-drano. Raha vantany vao nangonina ireo fitaovana, dia tehirizina ao anatin'ny "kibon'ny" dredge, antsoina hoe ny hopper. Ny sediment azo avy eo dia entina rehefa mivezivezy any amin'ny faritra napetraka na toerana fanariana ilay dredge. Ny fomba roa malaza indrindra amin'ny famoahana an'ity karazana dredge ity dia: 1) Fanariam-baravarana amin'ny alàlan'ny fanokafana ireo varavarana hopper izay hita ao ambanin'ny dredge; ary 2) Fanapoahana ny fasika mankeny amoron-dranomasina amin'ny alàlan'ny paompy misy ny sisiny Hopper dredges dia matetika ampiasaina amin'ny fananganana nosy, fitrandrahana ranomasina lalina, fampiharana rano fisokafana ary fananganana seranan-tsambo lehibe. Ny trondro Hopper dia matetika no manana olana amin'ny fiasana amin'ny toerana marivo, mitrandraka tsy misy marimarina kokoa noho ny karazana dredges hafa, ary lafo kokoa amin'ny fividianana sy fanamboarana.
"Ny McFarland" Hopper dredge - ny fizarana atsimo andrefan'ny Mississippi
Ny dredges Auger dia mampiasa excavator miendrika volo Archimedes mitsivalana ary miasa amin'ny alàlan'ny tariby sy ny fametrahana am-polony. Izy ireo dia ampiasaina amin'ny fanesorana ireo solida manokana sy fanarenana. Ny dredges Auger dia mety indrindra amin'ny fiasa tsy an'asa any amin'ny farihy sy amin'ny farihy rano maloto izay tsy irina na mampidi-doza ny fidiran'ny olombelona. Ireo sambo ireo dia azo ampiasaina amin'ny marina, famerenana amin'ny laoniny amin'ny farihy, na tetikasa fambolena rano. Ny rafitra rehetra dia natao ho an'ny fahaiza-manao betsaka sy fitaterana betsaka indrindra ary azo namboarina ho an'ny fampiharana manokana. Ny dredges Auger dia ampiasaina tsara indrindra amin'ny halalin'ny rano eo anelanelany
4 ft. (1.2 m) ary 30 ft (9 m). Ny lohan-dredge mivezivezy lehibe dia tsy dia mahomby amin'ny tany izay misy rano masiaka na henjana. Na izany aza, tena mahomby ny gony amin'ireny dredge ireny amin'ny fampiasana dobo filanjana satria mety omena kodiarana mahery vaika izy io mba hiarovana ny ambany tsy ho voasazy.
Ny dredge Bucketwheel
Ny dredge Bucketwheel dia miasa toy ny fanamoriana mpantsimoka amin'ny rafitry ny spud sy vatofantsika, mazàna amin'ny fampiasana kalesy spud. Ny dredges bucketwheel dia mety amin'ny fitrandrahana an-tsokosoko ary fangalarana ny fitaovana mafy kokoa. Mahomby sy mahitsy tsara ny drogel ny siny-marika ary manapaka tsara ny lafiny iray ary manome fifehezana lalina kokoa. Ny dredges an'ny Bucketwheel dia mety manana vidin'ny fividianana lafo kokoa noho ny ankamaroan'ny karazan-dredge ary namboarina ho fanatsarana ireo singa voamaina tsara.
Ny Ellicott B590E Bucketwheel Dredge - Kanada
Ny dredge Cutter Suction
Ny dredge Cutter Suction dia mampiasa excavator harona cutterhead mba hamelana ireo fitaovana ho dredged ary faritana amin'ny savaivon'ny fantsom-panafahana ilay dredge. Ny cutterhead mihodina an'ny dredge dia manodidina ny tsiranoka fidirana amin'ny fakana sary maimaimpoana izay afaka mamindra rano sy solida avy amin'ny faran'ny suction amin'ny alàlan'ny paompy miaraka amin'ny fantsom-pivoahana mankany amin'ny toerana fanariana. na mivantana mankany amin'ny morontsiraka iray izay ampiasana azy ireo ho an'ny tanjona fanavotana morontsiraka na fananan-tany. Ny trondro dia mitazona ny toerany amin'ny alàlan'ny spuds roa eo amin'ny vodin'ny trondro rehefa manondraka dredging ny cutterhead. Cutters dia manana andraikitra fototra roa:
Mamaha sy manaparitaha fitaovana avy any ambanin'ny lalan-drano mankany amin'ny sombin-tsoratra kely kokoa izay mifanaraka amin'ny rafi-pitaterana ny dredge.
Ampidiro ao anaty onjam-pandeha avo be any anaty rano ny fofona avo be any amin'ny fantsom-bavony amin'ny famoahana rano izay arotsaka ao amina paompy hidiran'ny dredge.
Ireo cutterheads kely dia azo esorina amin'ny fizarana ary mora entina. Ireo sambo ireo dia ampiasaina amin'ny fitrandrahana fasika sy vatokely, fanamboarana morontsiraka sy amoron-tsiraka, fikojakojana ny làlan-drano, fampivoarana sy fanitarana ny fantsona, fikojakojana ny seranan-tsambo ary tetikasa fanarenana ny tontolo iainana. Ny dredge Cutterhead dia miasa tsy misy fanelingelenana, manolotra fifehezana mazava tsara, marobe, ary heverina ho toeram-piasana indostrialy. Ny fetin'ny cutterhead dia misy fetrany, ao anatin'izany ny fahasarotana amin'ny fikirakirana sombin-javatra lehibe sy ny fiasa amin'ny toe-dranomasina lalina.
An Ellicott Series 670 Cutter Dragon® Dredge - Goatemalà
Zavatra tokony hodinihina alohan'ny hividianana hantsana
Raha mandany enim-bolana mahery ao anatin'ny enim-bolana isan-taona ianao, dia mety ho tonga saina ny mividy dredge, mpiasa amin'ny fiaran-dalamby, ary manome antoka fa manana drafitra fampandehanana mety ianao alohan'ny hividianana ny dredge.
Mety ho sarotra ny mihazona mpitaky ny dredge mahay mandritra ny taona raha toa ka tsy mandehandeha mihodinkodina amin'ny taona iray ianao.
Avereno jerena ny varotra eo anelanelan'ny vidin'ny fotoana fohy sy ny fampiasam-bola maharitra.
Ellicott Dredges, LLC dia mpitarika eran'izao tontolo izao amin'ny dredges fisarahana. Ny serasera misy anay dia natao hiarovana ny tontolo iainana, hanatsara sy hitahiry ny làlan-drano azo antoka, ary ireo loharanom-pitrandraka hampandrosoana ny toekarena. Maherin'ny 2,000 ny milina marika Ellicott® nalefa any amin'ny firenena 100 mahery. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny lalàn'i Ellicott portogey sela mikapoka, antso + 1-410-625-0808, na hamita ny Internet fanontaniana momba ny tetikasa, ary hisy olona hifandray aminao tsy ho ela.